You maara banyere ịdị adị nke agụmakwụkwọ maka okike edemede? | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
You maara banyere ịdị adị nke agụmakwụkwọ maka okike edemede?
Carmen Guillen | | Akwụkwọ, ọtụtụ
N’oge na-adịbeghị anya, m gụrụ otu akwụkwọ ọgụgụ ederede. Achọrọ m ịkọrọ gị ya, n'ihi na abụ m "checkered", pun zubere, mgbe m mụtara na enwere ụlọ akụ na-akwụ "ndị edemede" ụgwọ ka ha dee ma mechaa akwụkwọ. Edemede a jụrụ ajụjụ dere ya Alberto Olmos en "Ihe nzuzo", ma ị ga-agụ ya ebe a.
Nke kachasị njọ bụ na o doro anya na ọ meela ọtụtụ afọ! Ma dịka o kwuru n'ụzọ ziri ezi, mgbe ha na-enye gị ego tupu ịmalite akwụkwọ ma ị ga-emecha ya, ọ bụ "nsogbu" ịme ya ... Ebee ka nkà nke ide akwụkwọ maka ihe omume ntụrụndụ nke ime ya? Ebee ka onye edemede edemede nke sitere n'aka onye edemede ga-enyerịrị ike ya iji mee ka ọ ree ya na ndị na-agụ ya nwere mmasị na ya?
Ee, ọ bụ eziokwu, na ọ bụ naanị ndị odeakwụkwọ ole na ole na-enweta ego ha ji arụ ọrụ naanị site na ọrụ a, na uru akwụkwọ ga-enye gị site na ire ya, ọ bụrụhaala na ọ na-arụ ọrụ ọfụma, dị n'agbata euro 1.000 na 10.000, nke ukwuu tere aka na ruru 50.000 euro nke a na-enye na agụmakwụkwọ ndị a (ọnụọgụ dị iche iche dị ka ụlọ akụ ma ọ bụ ahụ dịịrị), mana ebee ihe egwu nke okike ederede? Ihe ọzọ bụ na, mgbe ị malitere akwụkwọ ị gaghị ama ma ị ga-agụcha ya; Agbanyeghị, iji agụmakwụkwọ a akwụ ụgwọ iji mezue ya. Ma, ozugbo edere ya, olee obi uto ị na-enweta site n'akwụkwọ a kwuru ma ọ bụrụ na akwụworị ụgwọ maka ya tupu ịme ya? Onye gwara gi na akwukwo a di nma na inwere ikike dika ode akwukwo? Nke kachasị njọ, na nke ọzọ ezi uche dị na aka nke ọzọ, bụ na ụlọ akụ na-enye gị ego ahụ dị ka agụmakwụkwọ, ọ bụrụ na ihe ọ bụla ị gwụghị akwụkwọ a, ịghaghachitere ego ahụ. Arụ ọtụtụ ọrụ! Inwekwu ọrụ, enweghị ntụkwasị obi dị ka onye edemede, obere akwụkwọ edemede, na obere ihe ọisticụ.
Ọ bụrụ na mmadụ hụ uru ụdị ọrụ okike a (na nke ahụ abụghị ego n'onwe ya), gwa m, biko.
Inye gi onyinye okike edeghi akwukwo gi gha adi nma; Ọ pụtaghị ma ọ bụ na ị bụ onye edemede ma ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi; ọ pụtaghị, ọ dị nwute, na a na-agba ndị na-eto eto ume ka ha gụọ akwụkwọ ma ọ bụ ịgụ akwụkwọ. Ka anyị jiri obi anyị niile! Ide ihe bụ nka, ọ bụghị ibu ọrụ ma ọ bụ ihe ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » You maara banyere ịdị adị nke agụmakwụkwọ maka okike edemede?
James Ellroy, Pepe Carvalho Award na BCNegra. Mụ na Mad Dog
You maara ngwa Bookchoice?